Nakaton’ny Filoha Goyaney Ny Antenimiera Mba Hisorohana Ny Latsabato Fitsipaham-pitokisana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2014 8:56 GMT
Tranoben'ny Antenimiera Goyana ao afovoan'i Georgetown. Sary avy amin'i David Stanley, zon'ny mpamorona, CC BY 2.0 license.
Mba hisorohana ny latsabato fitsipaham-pitokisana, nohalavain'ny filoha Goyaney Donald Ramotar enim-bolana (ny fitsaharan'ny depiote, tsy misy fanafoanana azy) ny antenimiera ao amin'ny firenena. Malaza amin'ny tsy fahatombenana ara-politika ifotony indrindra i Goyana, izay miteraka ahiahy fa hanohintohina ny demaokrasia ao amin'ny firenena ny fihetsik'i Ramotar. Maherin'ny 800 ireo olona efa nandray anjara tamin'ny fanangonan-tsonia antserasera miantso ny filoha Ramotar mba hiverina amin'ny fanapaha-keviny.
Dr. David Hinds, mpikatroka politika sady mpaneho hevitra ara-tsosialy nanoratra tao amin'ny Facebook fa very ny maha-ara-dalàna ny governemanta:
Amin'izao fotoana nampiatona ny antenimiera izao, noroahin'ny filoha ireo solontenam-bahoaka raha ny tena izy. Tsy afaka manao dinidinika ofisialy izy ireo mba hitondra ny tombotsoan'ny faritra misy ireo mpifidy azy ireo. Nalefa eny an-dalambe izy ireo – lalana izay idifian'izy ireo tahaka ny pesta nandritra ny telo taona. Ny filoha sy ny kabinetrany ary ny antoko no hany tokana mpitondra an'i Goyana. Nanendry tena ho mpanao didy jadon'ny firenena izy ireo; izany no nirian'izy ireo hatramin'izay. Nanova ny lalàmpanorenana izy ireo. Tsy afaka hiantoka intsony ny demaokrasia; alonalona izany.
Namoaka fanambarana ny Fiangonana Katolika Romana, izay nanohitra tanteraka politika radikalin'ny eitondrana Burnham:
Mametraka an'i Goyana ho anatin'ny sisintany tsy fantatra ny […] fampiatoana ny Antenimiera tamin'ny Alatsinainy 10 Novambra 2014.
Misy ny fanantenana fa hanome teny fitarihana na hanambara momba ireo olana ny “Fiangonana”. Saingy ny vahoaka manontolon'ny finoana no Fiangonana fa tsy ireo mpitarika azy ihany. Raha miaina amin'ny fampianaram-pinoana isan'andro ireo mpino avy amin'ny finoana rehetra dia hiteny amim-pahendrena tokoa ny Fiangonana. Raha eo amin'ny […] andavan'androm-piainana, mitsangana manoloana ireo fandrahonana sy kolikoly isika, dia hiteny amim-peo mafy indray ny Fiangonana. […] Amin'ny fotoanan'ny firosoana sy ny tetezamita dia antsoina isika rehetra handinika ny faharesen-dahatra ao amintsika ary hitondra izany amin'ny fihavaozana.
Marina tokoa fa taloha, ny Fiangonana Katolika no loha-laharana amin'ireo ezaka fampiroboroboana ny rariny sy ny filaminana ao Goyana […] Niasa tamin'ireo olana marobe ao amin'ny firenena isika, manomboka amin'ny fifidianana hatramin'ny herisetra an-tokantrano, hatramin'ny fakàna an-keriny ny olona.
Marina fa tsy mafonja ireo ezaka amin'izany sehatra izany. Am-panetre-tena, manoro hevitra aho fa i Goyana – tahaka ny Fiangonako – dia mila manamafy ny andrim-panjakana sy ny fifandraisana. Tsy maintsy mitady fomba vaovao mifandraika amin'ny hafa isika, ary rafitra tsara kokoa hanohanana sy handrisihana ireo fifandraisana nihatsara.
Niantso an'i Ramotar mba hiala amin'ny fanapaha-keviny ihany koa ny Fikambanan'ny Firenena Amerika:
Nilaza ny mpitarika ny Fikambanan'ny Ila bolantany fa «ao amin'ny demaokrasia, ny fahombiazana mahombin'ny Antenimiera no mamela ny fanamarinana sy fifandanjana hampandrenesana ny feon'ny vahoaka.» Nampahatsiahy izy fa «hatramin'ny fifidianana tamin'ny volana Novambra 2011, nanana rafi-pitantanana nozaraina amin'ny mpanatanteraka fehezin'ny antoko iray sy ny mpanohitra manana maro an'isa ao amin'ny Antenimiera i Goyana.» […]
Ho fanazavana ity zavamisy ity dia mandrisika ny antoko mitondra sy antoko manohitra ny Sekretera Jeneralin'ny OAS mba “hanamafy ny ezaka hahatongavana amin'ny fifankahazoana sy marimaritra iraisana amin'ireo olana ara-politika sy olana ara-tsosialy ary ara-toekarena goavana atrehin'ny firenena.»
Tao amin'ny Twitter, nampitaha ny fihetsik'i Ramotar amin'ny fampiatoana lalàmpanorenana tao Goyana Britanika nataon'ny manampahefana mpanjanaka ny mpisera iray:
“@1DancingCrane: Guyana president suspends parliament http://t.co/DKEkGTlDRt”: Well, we're back to 1953.Thats when Britain did nearly same.
— Leyland (@KINGLeyland) November 13, 2014
Nahanton'ny filohan'i Guyana ny antenimiera. Eny, miverina amin'ny 1953 isika. Raha nanao toy izany ihany koa ny Britanika
Profesora Maya Trotz, nandritra izany fotoana izany, nanontany tena ny antony mahatonga ireo lehiben'ny faritra tsy nilaza na inona na inona eo amin'ny kizo ara-politika:
Guyana: A 60-year schism http://t.co/46IUtR1H5C via @TheEconomist good stuff. No Caribbean leaders speak out yet.
— Maya Trotz (@matrotz) November 14, 2014
Goyana: 60 taona, zavatra tsara. Tsy mbola nisy mpitondra Karaiba naneho ny heviny hatreto.
Toa manana fanantenana i Iana Seales fa mety mbola resy lahatra hikarakara fifidianana vaovao i Ramotar :
Dear President Ramotar, the opposition is adamant there will be no talks outside of Parliament. Do the right thing & call elections #Guyana
— Iana Seales (@ianaseales) November 15, 2014
Ry filoha Ramotar hajaina, tsotra ny an'ny mpanohitra: tsy hisy ny fifampiraharahana ivelan'ny Antenimiera. Ataovy ny zavatra tokony atao ary manaova fifidianana
Mpanoratra sady mpikatroka Ruel Johnson nandefa sary nandritra ny fihetsiketsehana teo ivelan'ny tranoben'ny antenimiera tao Georgetown :
Sary nalefan'i Ruel Johnson (@rueljohnson) tamin'ny 11 Novambra 2014 tamin'ny 5:13 hariva PST.
Herinandro lasa izay, tamina raharaha mandeha amin'izao fotoana izao izay nanaitra ny maro tao anatin'ny fiarahamonina efa misara-kevitra tanteraka, voampanga ho nandrahona mpanoratra gazety ny mpampanoa lalàna tao Goyana. Vao haingana, nanaparitaka fampahafantarana mangataka amin'ireo mpanolotra fandaharana ny vondron'orinasa radio malaza ao Goyana mba tsy hiresaka politika mandritra ny fandaharana.
Ny antokon'ny mpanohitra kosa nilaza fa mandà tsy hifampiraharaha amin'ny filoha raha mbola miantona ny antenimiera. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mbola tsy ho tafala amin'ny kizo ny raharaha.